Ugu dambeyn tababare Arsene Wenger oo jamaahiirta Arsenal u sheegay xilliga go’aanka rasmiga ah laga gaari doono mustaqbalkiisa! | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » Ugu dambeyn tababare Arsene Wenger oo jamaahiirta Arsenal u sheegay xilliga go’aanka rasmiga ah laga gaari doono mustaqbalkiisa!
Ugu dambeyn tababare Arsene Wenger oo jamaahiirta Arsenal u sheegay xilliga go’aanka rasmiga ah laga gaari doono mustaqbalkiisa!
Tababaraha Faransiiska u dhashay Arsene Wenger ayaa daaha ka qaaday in mustaqbalkiisa kooxda Arsenal xal rasmi ah laga soo saari doono ka dib finalka koobka FA Cup markaasoo ay kulan yeelan doonaan agaasinka kooxda Gunners.
Mustaqbalka tababarahaan halyeeyga ah ee kooxda Arsenal ayaa muddo dheer shaki ku jiray, dhammaadka ololahaan 2016 illaa 2017 ayeyna ku egtahay kunturaadda uu kula jiro kooxdiisa Arsenal. Taageereyaasha kooxda ayaana si weyn ugu baaqaya in xilka laga xayuubiyo.
Sababta ugu weyn ayaana ah inay Arsenal markale mareyso xilli ciyaareed fashil ah, iyadoo qarka u saaran inay seegto tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedka soo aadan, haddii kooxda Liverpool aysan guuldarro kala kulmin Middlesbrough, maalinta ugu dambeysa ololaha EPL iyadoo Gunners ay Axada martigelineyso Everton.
Wenger ayaana qarka u saaran inuu Gunners ku hogaamiyo ku dhammeysashada meel ka baxsan afarta kaalin ee sarre ee horyaalka Ingiriiska markii ugu horreysay taliskiisa kooxdaan.
Saxaafadda ayuu shir u qabtay ka hor kulankooda ugu dambeeya ee horyaalka Premer League kaasoo ka dhici doona garoonkooda FLY Emirates Stadium, waxaana wax laga weydiiyey in kulankaani uu noqon karo midkii ugu dambeysay ee uu garoonkiisa ku maamulo Arsenal, isagoo ku jawaabay: “Haddii laga hadlayo xilli ciyaareedkaan, haa markaas waa midkeygii ugu dambeeyey.”
Warbaahinta ayaa ku riixday inuu jawaabta si sax ah uga jawaabo, waxaana la weydiiyey haddii kulankaani uu noqon karo midkiisii ugu dambeeyey ee uu kooxda ka dhisan Waqooyiga London ku hogaamiyo garoonkeeda, wuxuuna ku jawaabay: “Taas idiinma sheegi karo.
“Waxaan y maleynayaa in ujeedka ugu muhiimsan ee kooxdaan uu yahay inay badiso ciyaaraheeda, gaar ahaan kulanka Axada. Ka dibna waxaan kooxda leylin doonaa finalka FA Cup, waxaan isku deyi doonaa inaan badino, balse kulankaas ka dib ayey maamulka kooxdu shir yeelan doonaan markaas ayaana mustaqbalkeyga la kala caddeyn doonaa”.
Warar hoose ayaa sheegaya in agaasinka kooxda Arsenal ay isla meeldhigeen inay tababarahaan ka saxiixdaan qandaraas cusub oo laba sanno ah, wuxuuna Gunners maamulayey 21kii sanno ee ugu dambeysay.